ဧပြီလ (၁) ရက်ကနေ (၉) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမယ့် Shop အွန်လိုင်းရဲ့ မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးမှာ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် နှစ်သိန်းအထိလျော့ဈေးတွေအပါအဝင် အတန်ဆုံးပစ္စည်း ၁၀မျိုး
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်လက်မှတ် ၊ဖုန်း၊ လက်တော့၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း နဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော်ကို ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်
အခုဆိုရင် မဟာသင်္ကြန်ကာလဟာ ကျရောက်တော့မှာဆိုတော့ ဈေးဝယ်ချင်သူတွေအတွက် ၈၉% အထိ လျော့ဈေးတွေနဲ့ Shop ရဲ့ သင်္ကြန်အထူးအွန်လိုင်းလျော့ဈေးမှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်လက်မှတ် ၊ဖုန်း၊ လက်တော့၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း နဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော်ကို ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဧပြီလ (၁) ရက်ကနေ (၉) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ဈေးဝယ်သူတွေအတွက် လျော့ဈေးပေါင်းများစွာအပြင်၊ ဘောက်ချာကုတ်လျော့ဈေး နဲ့ Visa လျော့ဈေးပေါင်းများစွာ ပါဝင်မှာပါ။အဲဒီလိုအထူးလျှော့ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချမယ့် ပစ္စည်းပေါင်း ၅၀၀၀၀ ထဲကမှ အဝယ်သင့်ဆုံးပစ္စည်း ၁၀ မျိုးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) Huawei Y Max ( ၃၆၉,၀၀၀ ကျပ် မှ ၂၇၄၀၀၀ ကျပ်အထိလျော့ဈေး)
လက်ရှိ Huwwei Y Max ဟာပြင်ပဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ၃၆၉၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ပေါက်ဈေးဖြစ်နေပြီး၊ Shop အွန်လိုင်းကနေ မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာာလမှာ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ၃၁၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ လျော့ဈေး ငါးသောင်းအထိရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei Y Max ဖုန်းရဲ့ထူးခြားချက်တော့ Screen က ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး Display က 7.2” ၊ Ram4GB အထိပါဝင်ကား၊ Resolution 1080 p အထိ ရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကလည်း 5000mAh ဖြစ်တာကြောင့် အကြာကြီးအသုံးခံမှာပါ။ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ SHOPTGYMAX - ဘောက်ချာကုဒ်ကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CB Visa ကိုအသုံးပြုပြီး ထပ်ဆောင်း ၂၀% လျော့ဈေး (အမြင့်ဆုံး ၄၀၀၀၀ ကျပ်)အထိလည်း ထပ်မံလျော့ပေးမှာမို့ ၂၇၄၀၀၀ ကျပ်သာကျသင့်မှာပါ။ HUAWEI Y MAX နဲ့ အခြားအမှတ်တံဆိပ် ဖုန်းများ ကို Shop မှာဝယ်ယူရန် Link
(၂) Barrack Water Festival လက်မှတ်
"Noisecontrollers , DJ SURA, Salvatore Ganacci အစရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် DJ တွေပါဝင်မယ့် Barrack Water Festival ရဲ့ လက်မှတ်တွေကိုလည်း Shop အွန်လိုင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ Barrack Water Festival ကို ဧပြီလ ၁၃ မှ ၁၆ ရက်နေ့ ၊ ပြည်လမ်း မှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်တွေကို Shop မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူပြီး ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ VISA ကဒ်နဲ့ ဝယ်ယူရင် ၁၀% လျှော့ဈေးရရှိမှာဖြစ်ပြီး အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်အထိသက်သာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Barrack Water Festival လက်မှတ်ကို VIP all day ၉၀၀၀၀ကျပ် နှင့် အခြားပွဲလက်မှတ်များကိုShop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၃) Zerowatt Semi Auto အဝတ်လျှော်စက် ( ၁၇၅၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၅၆၀၀ ကျပ်အထိလျော့ဈေး)
အဝတ်လျှော်စက်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေသူတွေအတွက်လည်း Shop အွန်လိုင်းမဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာလမှာ အရမ်းတန်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ အပြင်ဆိုင်တွေမှာ ၁၇၅၀၀၀ ကျပ်ဈေးရှိတဲ့ Zerowatt Semi Auto အဝတ်လျှော်စက်ကို CB Visa နှင့့် ဘောက်ချာကုဒ် SHOPTG3000 ဝယ်ယူပါက့ ၁၀၅၆၀၀ ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူပြီး ၆၉၄၀၀ ကျပ်အထိလျော့ဈေးရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဝတ်လျှော်စက်ဟာ Semi Auto ဖြစ်တာကြောင့် အဝတ်လျှော်တဲ့နေရာမှာအချိန်ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပြီး gentle washing mode လည်းပါဝင်တာကြောင့် နူးညံ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိဘဲလျှော်ဖွပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ) Zerowatt Semi Auto အဝတ်လျှော်စက် နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် အဝတ်လျှော်စက်များ ကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၄) Hisense ရေခဲသေတ္တာ (၂၅၂၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၆၃၀၀၀ ကျပ်အထိလျော့ဈေး)
Hisense ရဲ့2door ၊ Timer Type RD18 ရေခဲသေတ္တာဟာ အပြင်ဆိုင်တွေမှာ ၂၅၂၀၀၀ ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ ဒီရေခဲသေတ္တာကို Shop အွန်လိုင်းမဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာလမှာတော့ CB Visa နှင့့် ဘောက်ချာကုဒ် SHOPTG3000 ဝယ်ယူပါက ၁၆၃၀၀၀ ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၈၉၀၀၀ ကျပ်အထိလျော့ဈေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်လေးပွင့်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီရေခဲသေတ္တာဟာ ဆူညံသံသက်သာသလို လျှပ်စစ်စွမ်းအားအသုံးပြုမှုလည်းသက်သာပါတယ်။ ၁၃၈ လီတာဝင်ဆံ့ပြီး အအေးနှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Hisense လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဟာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ချရတာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါပဲ။ Hisense ရေခဲသေတ္တာ နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် ရေခဲသေတ္တာများ ကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၅) Samsung လက်မ ၄၀ TV
ပုံမှန်ဈေး ၅၄၅၀၀၀ ကျပ်ရှိနေတဲ့ Samsung လက်မ ၄၀ TV ကို Shop အွန်လိုင်းရဲ့ မဟာသင်္ကြန်လျော့ ဈေးကာလမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ၃၆၅၀၀၀ ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်တာကြောင့် လျော့ဈေး ၁၈၀၀၀၀ ကျပ်အထိရရှိမှာ ဖြစ်လို့ အရမ်းကိုတန်ပါတယ်။ Samsung လက်မ ၄၀ TV ရဲ့ Model No က UA40M5000AKXMR ဖြစ်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD (1920x1080) ရုပ်ထွက်၊ Slim Edge Design ၊ ကောင်းမွန်လှတဲ့ Dolby Digital (+) အသံထွက်စနစ်၊ DVB T2 Tuner(+) နဲ့ Hard disk ၊ USB တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ USB ပေါက်၊ Laptop ကွန်ပြူတာနဲ့အခြား Device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ HDMI ပေါက် ၂ ပေါက်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။
ဘောက်ချာကုတ် SHOPTG20000 ဖြင့် ၂၀၀၀၀ကျပ်လျော့ဈေး နှင့် CB Visa ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်း ၂၀% လျော့ဈေး (အမြင့်ဆုံး ၄၀၀၀၀ကျပ်) အထိ စုစုပေါင်း ၆၀၀၀၀ကျပ် အထိထပ်ဆောင်းလျော့ဈေးရယူနိုင်ပါတယ်။
Samsung လက်မ ၄၀ TV နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် TV များကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၆) Lenovo ideapad 300 (Pentium) Laptop (Black color)
လက်ပ်တော့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေသူတွေအတွက် Lenovo ideapad 300 လက်ပ်တော့ကို Shop အွန်လိုင်းရဲ့ မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာလမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ၂၃၇၀၀၀ ကျပ်အထိသက်သာမှာမလို့အရမ်းကိုတန်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ပေါက်ဈေး ၆၅၇၀၀၀ ကျပ်ရှိတဲ့ဒီ လက်ပ်တော့ကို ၄၂၀၀၀၀ ကျပ်ထဲနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘောက်ချာကုတ် SHOPTG20000 ဖြင့် ၂၀၀၀၀ကျပ်လျော့ဈေး နှင့် CB Visa ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်း ၂၀% လျော့ဈေး (အမြင့်ဆုံး ၄၀၀၀၀ကျပ်) အထိ စုစုပေါင်း ၆၀၀၀၀ကျပ် အထိလျော့ဈေးရယူနိုင်ပါတယ်။
၁၄ လက်မအရွယ်အစားရှိ ဒီ လက်ပ်တော့မှာ Memory 4GB DDR3L 1600 ၊ 500 GB HDD ၊ N16V-GM DDR3L 1GB Graphic Card တို့ပါဝင်ကာ Intel Pentium N3710 Processor နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လက်ပ်တော့ တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ) Lenovo ideapad 300 (Pentium) Laptop နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် လက်ပ်တော့များကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၇) Huawei Nova3စမတ်ဖုန်း
လူကြိုက်များပြီးရောင်းအားကောင်းလှတဲ့ Huawei ရဲ့ Nova3စမတ်ဖန်းကိုလည်း Shop အွန်လိုင်းရဲ့ မဟာသင်္ကြန် လျော့ဈေးကာလမှာ အရမ်းတန်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။ အပြင်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းဈေး ၅၈၉၀၀၀ ကျပ်ရှိတဲ့ဒီစမတ်ဖုန်း ကို Shop အွန်လိုင်းရဲ့ မဟာသင်္ကြန် လျော့ဈေးကာလမှာတော့ ၄၉၉၀၀၀ ကျပ်ထဲနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ၉၀၀၀၀ ကျပ်အထိလျော့ဈေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး Notch ဒီဇိုင်းနဲ့ ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်၊ RAM6GB ၊ Storage 128 GB ၊ 16MP ကင်မရာ ၊ 3750 mAh ဘက်ထရီ၊ Finger Print တို့နဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီစွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ နည်းပညာတွေပါဝင်နေတဲ့အပြင် ဒီဇိုင်းကလည်း သေသပ်လှပလှပါတယ်။
Huawei Nova3စမတ်ဖုန်း နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် စမတ်ဖုန်းများ ကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၈) Xiaomi Mi6စမတ်ဖုန်း
RAM 6GB ၊ ROM 63 GB ရှိတဲ့ Xiaomi Mi6စမတ်ဖုန်းကို အပြင်ဆိုင်တွေမှာ ၄၁၉၀၀၀ ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေပြီး Shop အွန်လိုင်းရဲ့မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာလမှာတော့ ၃၉၁၅၀၀ ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် လျော့ဈေး ၂၇၅၀၀ ကျပ်အထိ ရရှိမှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ ၂ လုံး (12MP + 12MP )၊ အရှေ့ဘက်မှာ 8MP Selfie ကင်မရာ ပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင်က ၅.၁၅ လက်မ 1920x1080 Full HD ရှိပါတယ်။ CPU က Snapdragon 835 Octa Core 2.45 GHz ဖြစ်တာကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး Xiaomi ရဲ့တန်းမြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi Mi6စမတ်ဖုန်းနှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများ ကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၉) Innisfree Green Tea Special Kit
သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာအသားအရေမပျက်စီးရအောင်ထိန်းသိမ်းမယ့်သူတွေအတွက် Innisfree Green Tea Skin Care Special Kit ကိုလည်း Shop အွန်လိုင်းရဲ့မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာလမှာဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။ အပြင်မှာပုံမှန်ဈေး ၁၅၀၀၀ ကျပ်ရှိတဲ့ ဒီ Innisfree Green Tea Special Kit ကို Shop အွန်လိုင်းရဲ့မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေး မှာတော့ ၉၅၀၀ ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်တာကြောင့် ၅၅၀၀ ကျပ်တောင်သက်သာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေ အစိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး ညီညွတ်မျှတစေနိုင်တဲ့ သဘာဝ Green Tea ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Skin Care ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားတာကြောင့် လူတိုင်းနှစ်သက်ကြတဲ့ Skin Care ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Innisfree Green Tea Special Kit နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ်အလှကုန်များ ကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
(၁၀) Sketcher Women's Wear You Inspire Sneaker
ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sketcher ရဲ့ နာမည်ကျော်စီးရီး You Inspire Sneaker ကိုအမျိုးသမီးတွေ အတွက်ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီဖိနပ်ကို အပြင်မှာပုံမှန်ဆိုရင် ၉၅၀၀၀ ကျပ်အထိပေးပြီးဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပေမယ့် Shop အွန်လိုင်းရဲ့ မဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးကာလမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ၅၅၀၀၀ ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်လို့ ၄၀၀၀၀ ကျပ်တောင်သက်သာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘောက်ချာကုတ် SHOPTG3000 ဖြင့် ၃၀၀၀ ကျပ်လျော့ဈေး နှင့် CB Visa ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်း ၂၀% လျော့ဈေး (အမြင့်ဆုံး ၄၀၀၀၀ကျပ်) အထိထပ်ဆောင်းလျော့ဈေးရယူနိုင်ပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုထားပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်းထူးခြားကောင်းမွန်လှတာကြောင့် ဖိနပ်စီးထားရတာပင်ပန်းမှုလုံးဝမရှိဘဲ သက်သောင့်သက်သာရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်အပါအဝင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ပျော်ရွှင်ကြမယ့်ပွဲမျိုးတွေတိုင်းနဲ့အထူးသင့်လျော်လှပါတယ်။
Sketcher Women's Wear You Inspire Sneaker နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် စနီကာများ ကို Shop မှာ ဝယ်ယူရန် Link
ဧပြီလ ၁ မှ ၉ ရက်နေ့ အတွင်း Shop အွန်လိုင်းမဟာသင်္ကြန်လျော့ဈေးမှာ ဝယ်ယူဖို့အတွက် အခုပဲ ဒီ Link မှာ
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို Add to cart နှိပ်ပြီး သိမ်းထားပြီး Check-out လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ဘောက်ချာကုတ်၊ Visa ကတ်နဲ့ CB Visa ကတ်တွေနဲ့ ငွေပေးချေရင် ထပ်ဆောင်းလျော့ချထားတာ ဖြစ်လို့ လက်မနှေးဘဲ ချက်ချင်းပြေးဝယ်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့ ဆိုရမှာပေါ့။
? VISA ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုအတွက် ၁၀% လျှော့ဈေး (အများဆုံး ၂ သောင်းကျပ်အထိ)
? CB VISA ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုအတွက် ၂၀% လျှော့ဈေး (အများဆုံး ၄ သောင်းကျပ်အထိ)
✔️အနည်းဆုံး ကျပ် ၃သောင်းခွဲဖိုးဝယ်လျှင် ၃ ထောင်ကျပ်လျှော့ဈေး ရယူရန် - ဘောက်ချာကုဒ် SHOPTG3000
✔️အနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းခွဲဖိုး ဝယ်လျှင် ၂ သောင်း ကျပ်လျှော့ဈေး ရယူရန် - ဘောက်ချာကုဒ် SHOPTG20000
✔️အနည်းဆုံး ကျပ် ၆ သိန်းခွဲဖိုး ဝယ်လျှင် ၄ သောင်းခွဲ ကျပ်လျှော့ဈေး ရယူရန် - ဘောက်ချာကုဒ် SHOPTG45000
? ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုနေရာအနှံ့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းအိမ်ရောက်မှ ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ စနစ် (Cash On Delivery) လည်းရှိပါတယ်။
အော်ဒါတင်တဲ့အချိန်လိပ်စာမပြည့်စုံရင် အော်ဒါ cancel ဖြစ်မှာမို့ အိမ်နံပါတ်၊လမ်းနာမည်၊ မြို့နယ်၊တိုင်း လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြည့်သွင်းပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။
Shop ရဲ့ App ကို ဖုန်းထဲ Download ဆွဲထားပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစွာ ဈေးဝယ်လိုက်ပါ ။
Shop App ကို ရယူရန် Link